Sahotaka tetsy Mahamasina sy HJRA : roa maty nipoahan’ny grenady, 72 mahery naratra | NewsMada
Hatramin’ny ora farany nanoratana, halina, roa no fantatra fa maty, maherin’ny 72 ireo naratra ka misy amin’ireo ny voa mafy. Izany no vokatry ny fipoahana grenady, teo avaratry ny podium, tetsy Mahamasina, halina tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany. Sahotaka tsy nisy ohatra izany, tetsy Mahamasina hatreny amin’ny Urgence HJRA.
Raikitra ny fifanjevoana, omaly, teo amin’ireo olona marobe nijery podium taorian’ny fipoahan’ilay grenady mahery vaika natsipin’olon-tsy fantatra teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Araka ny fanazavan’ireo nahita ny zava-nitranga teny an-toerana, taorian’ny fahavitan’ny tarika Jerry Marcoss ny anjarany teny an-tsehatra no nitrangan’ny fipoahana mahery vaika tao anaty olona. Teo amin’ny fotoana hidiran’i Stéphanie teny an-tsehatra, nipoaka tampoka ny grenady ka voatery tsy maintsy najanona ny lanonana noho ny fikoropahan’ny olona. Tovolahy iray antsoina hoe Randriamboavonjy Avotriniaina Augustin, 18 taona monina eny Anosibe maty teo noho eo tratran’ny fipoahana. Ankizilahikely iray 16 taona antsoina hoe Rakotonirina Tovoniala Patrick ilay namoy ny ainy teny amin’ny hopitaly. Voalazan’ny fianakaviany fa hanala BEPC amin’ity taona ity izy, saingy izao namoy ny ainy izao. Tsy mbola hita kosa ny zandriny niaraka taminy teny Mahamasina. Nanao tohivakana ny fahatongavan’ireo naratra teny amin’ny hopitaly HJRA, omaly halina. Nifanitsakitro koa ireo olona nijery ny fianakaviany na tao amin’ny sampana vonjy taitra na tao amin’ny tranom-paty satria samy nitaintaina daholo rehefa tsy nahita ny havany ireo olona sasany.
Mihosin-dra indray ny tantaram-pirenena
Fantatra, araka ny tatitra nampitain’ny filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, sy ny Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly, nandritra ny fandalovan’izy ireo teny amin’ny hopitaly nankahery ireo niharam-boina, fa roa ny maty ary 72 kosa ireo naratra. Misy tamin’izy ireo naratra nipoahan’ilay grenady raha vokatry ny fifanosehana nandritra ny fitsoahana kosa ny an’ireo hafa.
Mihosin-dra indray, araka izany, ny tantaram-pirenena. Niteraka fatiolona sy faharatrana tsy manan-tsiny, ny fipoahana grenady tamin’ireo nijery fety tetsy Mahamasina.
Tsy rariny raha mbola Malagasy ihany no nahavita izao. Na inona na inona, firehana na tsy fitoviam-pijery ara-politika, tsy tokony hiafara amn’ny fifamonoana tahaka izao ny raharaha. “Ny hevitra no mety tsy mitovy fa tsy azo ekena kosa ny fanakorontanana. Noho izany, manome baiko hentitra ny mpitandro filaminana mba handray fepetra hentitra manoloana izao”, hoy ny filoham-pirenena, Rajaonarimampianina.
Tokony hametra-pialana ny mpitantana sy tompon’andraikitra…
Etsy andaniny, nifarana hatreo amin’ny fidirana tamin’ny fanatrehana ny matso ny fisavan’ny mpitandro filaminana sa nitohy hatramin’ny tolakandro ? Taiza no tsy hita izany olona izany ? An’iza sy marika inona ilay grenadry? Mety mifandray amin’ilay olona iray tratra nanapoaka cocktail molotov tetsy Anosy, omaly, ihany izao ? Vao namoy havana sy fianakaviana ny any atsimo noho ny asan-dahalo ny herinandro teo. Tokony hampandinika ny mpitondra sy ny tompon’andraikitra ny tahaka izao. Sao tokony hiala sy hametra-pialana ny mpitantana rehefa tsy mahavita ?
Efa niseho ny tranga tahaka izao ny 25 janoary 2014 tetsy Anosy, taorian’ny lanonana fametrahana ny filoha Rajaonarimampianina sy nanaovany fianianany. Zaza iray maty ary 40 mahery koa naratra tamin’izany. Toerana fiantsonan’ny taxi-be eo ary feno mpivarotra amoron-dalana rahateo. Voalaza fa nisy fiara 4X4 nandeha mafy be taloha kelin’ny fipoahan’ilay grenady. Mpanao politika iray nampiantsoin’ny zandary tamin’izany, saingy tsy hita ny niafaran’ny raharaha. Hanao ahoana indray ny tohin’ity raharaha ity ?